fb Security Features and Tips အပိုင္း-၆
Security Features and Tips အပိုင်း-၆
စဆရက လုပ်ဖို့ လျှောက်ရေးထားတာ အခြား စဆရကတွေ အတွက်မရည်ရွယ်ပါဘူး အားမှ အပျင်းပြေ ဖတ်ပါ... https://www.facebook.com/help/285695718429403/ ကို မှီးငြမ်းရေးသားပါတယ်...
How do I get alerts about unrecognized logins to Facebook??
Facebook ကို ကျော့်တို့ ဝင်နေကြမဟုတ်တဲ့ device ဒါမှမဟုတ် web browser ကနေ အခြားသူ တစ်ယောက်ယောက်က ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် facebook ကို alert ပို့ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို alert ပို့ခိုင်းဖို့အတွက်...
1. Security and Login Settings (https://www.facebook.com/settings?tab=security) ကို သွားပါ။
2. Get alerts about unrecognized login ကိုရှာပြီး Edit ကို နှိပ်ပါ။
3. Facebook app ကနေ notification လက်ခံရှိချင်တယ်ဆိုရင် Notifications အောက်က Get Notification ကိုရွှေးပါ။ Messenger ကနဲ့ email ကို Notification ပို့စေချင်ရင် သက်ဆိုင်ရာအောင်က Get Notification ကို ရွေးပါ။
4. ပြီးရင် Save Changes ကို နှိပ်ပါ။ Password တောင်းခဲ့ရင် password ထည့်ပါ။
အဲဒီအဆင့်တွေ လုပ်ပြီးရင် ကျော့်တို့ login မဝင်ဖူးသေးတဲ့ device/browser ကနေ ကျော့်တို့ ကိုယ်တိုင် login ဝင်မိတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသူတစ်ယောက်က login ဝင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် facebook ကနေ alert ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျော့်တို့ကိုယ်တိုင် login မဝင်ဖူးသေးတဲ့ device/browser ကနေ login ဝင်ခဲ့လို့ notification ရောက်လာခဲ့ရင် “This was me” ကိုရွေးပေးပါ။
ကျော့်တို့ဝင်တာ မဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်ယောက်က ဝင်ခဲ့ပြီး notification ရောက် ခဲ့ရင်တော့ “This was’t me” ကိုရွေးပြီး password အသစ်ပြောင်းပြီး ကျော့်တို့ရဲ့ fb account ကို လုံခြုံအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျန်တာကို ဘယ်လို ဆက်ရွှီးရမလဲ မသိတော့လို့ https://www.facebook.com/help/162968940433354... မှာသွားဖတ်ပါတော့ ခင်ဗျား …